Maty farany ny fanantenana - Church of the World of God Switzerland
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-02 > Maty ny fanantenana
Hoy ny ohabolana iray: "Ny fanantenana dia maty farany!" Raha marina izany teny izany, dia ny fahafatesana no fiafaran'ny fanantenana. Tao amin’ny toriteny tamin’ny Pentekosta, dia nanambara i Petera fa tsy afaka nihazona an’i Jesosy intsony ny fahafatesana: “Andriamanitra nanangana Azy (Jesosy) ka nanafaka Azy tamin’ny fanaintainan’ny fahafatesana, satria tsy hain’ny fahafatesana hohazonina Izy” (Asan’ny Apostoly). 2,24).
Nohazavain’i Paoly taty aoriana fa ny kristiana, araka ny asehon’ny tandindona amin’ny batisa, dia tsy nandray anjara tamin’ny fanomboana an’i Jesoa ihany fa tamin’ny fitsanganany tamin’ny maty koa. « Koa niara-nalevina taminy tamin’ny batisa ho amin’ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana an’i Kristy tamin’ny maty tamin’ny voninahitry ny Ray no handehanantsika kosa amin’ny fiainam-baovao. Fa raha niara-nitombo taminy isika ka tonga tahaka Azy tamin’ny fahafatesany, dia ho tahaka Azy koa amin’ny fitsanganana amin’ny maty” (Romana 6,4- iray).
Izany no antony mahatonga ny fahafatesana tsy hanan-kery mandrakizay ho antsika. Ao amin'i Jesosy dia manana fandresena sy fanantenana isika fa hiakatra amin'ny fiainana mandrakizay. Nanomboka ny fiainam-baovao ity rehefa nanaiky ny fiainan'i Kristy nitsangana tamin'ny tenantsika isika amin'ny finoana azy. Na miaina na maty isika dia mitoetra ao anatintsika ary i Jesoa no fanantenantsika.
Sarotra ny fahafatesana ara-batana, indrindra ho an’ny havana aman-tsakaiza tavela. Na izany aza, tsy afaka ny hihazona ny maty ny fahafatesana satria ao amin’ny fiainam-baovao ao amin’i Jesoa Kristy, Izay hany manana ny fiainana mandrakizay. “Fa izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra Anao, fa Hianao no hany Andriamanitra marina sy Jesosy Kristy nirahinao” (Jaona 1.7,3). Ho anao, tsy ny fahafatesana intsony no fiafaran’ny fanantenanao sy ny nofinao, fa ny fifindrana ho amin’ny fiainana mandrakizay eo an-tanan’ilay Ray any an-danitra, izay nanao izany rehetra izany tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanany!